कसैले जितेको छैन यहाँ..!! :: Rajendra Gautam
मुख्य पृष्ठ > कसैले जितेको छैन यहाँ..!!
कसैले जितेको छैन यहाँ..!!
न ज्ञानेन्द्रले जित्यो न पारसले, न गिरिजाले जित्यो न प्रचण्डले, न माकुनेले जित्यो न झक्कुलेनै कसैले जितेको छैन यहाँ तेसैले यो हार्नेको देश हो। भस्टचार गरेर जिते भन्लान तर युवाहरुको ढुकढुकी जितेका छैनन, चुनाब जिते भन्लान कसैले तर जनताको मन जित्न कसैले सकेनन् यहाँ। संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन त परै जावोस् सरकार पनि बनाउँन सकेनन् यहाँ। त्यसैले त भन्न मन लाग्छ यो हरुवाहरुको देश हो। अझ भन्ने हो भने पैसै पैसामा बिकेको देश हो यो। नेता किनिन्छन्, सरकार किनिन्छ, कर्मचारी किनिन्छ, पुलिश किनिन्छ । दुनिया को कमाई खाने बाटो राजनीति, मान्छे को किनबेच गर्ने पशुतुल्य राजनीति, नागरिकता, पासपोर्ट्, लाइसन्स किनिन्छ । अव त्यतिले मात्र नपुगेर न्याय पनि किनवेच हुन्छ हाम्रो देशमा ।
एउटा जाबो सहमति गर्न न सक्नेले सिङ्गो देश लाई हाक्न कसरी सक्छन होला ? सहमति को अर्थ थाहा नहुनेलाई सहमति- सहमति भनि किन कुर्लियका होलान ? गुन्डागर्दी हत्या अनि आतंक को राजनीति, हासी हासी आफ्ना लाईनै छुरा रोप्ने राजनीति; त्यसैले सच्चा राजनीतिकर्ता पनि ठाउं मा नपुगुन्जेल केहि गर्छु भनेर अगाडी बढ्न खोज्छन ठाउंमा पुगे पछि आफ्नो लगानी उठाउन थाल्छन जुन लगानी मृत्युसैया मा पुग्दा सम्म ले पनि पुग्दैन !
ठुल्ठुला आस्वासन बाड्ने गरिन्छ यहाँ। भनिन्छ लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको देश रे यो उफ कहाँ छ स्वतन्त्रता यहाँ, जसले मन लाग्यो जहिले मन लाग्यो तोडफोड र वन्द हाडतालले गाँजेको छ यो देश । काम गरेर खान पुग्दैन । शान्ति कहाँ छ त्यो पनि खोज्नुपर्ने अवस्था छ । छ त केवल लडाकु हरुको जत्था छ। लाग्छ अझै अर्को नालापनीको युद्धको लागी तयारी मा बसेका छन् ।आफ्नो मोलिकता आफ्नो विचार नै नभका नेताहरु छन् , तेसैले बेचिन , पार्टी बदल्न यिनीहरुलाई कुनै गार्हो छैन! बास्तबिकता, देशको गतोरोध स्तिथि मा पनि संयम नहुने नेताहरु ले भोलिका दिनमा कुन मोडे तिर देशलाई लैजान्छन यो आफैमा अनिश्चित बनिसकेको छ! नेताहरु जनतालाई समेत नबुज्ने यी हरुको हर्कत कतिदिन हेर्नु पर्ने हो ?
बर्षौ भयो यहाँ विकाश त भएन तर विगार्ने काम भने भाकै हुन् । लुट मचाउकै छन् । चाहे त्यो आतंककारी, फटाहाहरुले हुन् या त राजनीतिज्ञ भनाउँदोहरुले । ऐतिहासिक सम्पदाहरु नष्ट भए, वन जंगल, हिमाल पहाड सवै सकिए। केवल विकृति फष्टायो यहाँ । नेताले जनतालाइ हात हाल्ने चलनकोको बिकास भयो । नेताले कर्मचारीलाई चडकाउँदा समेत माथिल्लो निकायका ठूला भनाउँदाहरुले वोलन चाहेनन् । जनताले पनि नेताहरुलाई गालि गर्ने चलनको मात्र बिकास भयो। नेताहरुलाइ कठालो समाएर जनकारवाही गर्ने पद्धतीको विकास गर्न सकेनन् सायद सोझा जनताहरुले । त्यही भएर होला हजारौं गुणा महगी बढिरहयो बढिरहयो । जनता चुपचाप सहिरहे ।
- राजेन्द्र गौतम